မှတ်စုမှတ်တမ်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 45
ဒေါက်တာဓမ္မပိယ ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၁၂ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေ…။ လူပြောသူပြော များနေတဲ့သတင်းက ပညာရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူ့အခွင့်ရေး သတင်းများပါ။ “ပေါက်ပင် ဘာကြောင့်ကိုင်းခဲ့ရတယ်˝ ဆိုတဲ့ အမေးကို အဖြေဖော်ထုတ်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံခေါင်းတော်ဆောင်များနှင့် ပြည်သူများ ပူးပေါင်းပြီး အဖြေကို ရှာဖွေညှိနှိုင်းနေကြခြင်းပါ။ အထူးသဖြင့် ပညာရေးမူဝါဒများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးရက်ခန့်က ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကြီးနှစ်ခုကို အဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ်ကြီးများ ဖြစ်လာနိုင်စေရန် ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ သတင်းကို ရေဒီယိုမှတဆင့် ကြားသိရ၍ ဝမ်းသာကြည်းနူး ဖြစ်မိခြင်းပါ။ ပညာရေးသတင်းမို့ အထူးစိတ်ဝင်စားမိခြင်းပါ။ တက္ကသိုလ်ပညာရေးမူဝါဒများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲတော့မည်ဆိုလျှင် အဘယ်သို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲကြမည်နည်း။ အဖြေရှာနိုင်ဖို့ပါ။ စဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေ များစွာရှိနေသော်လည်း အရေးကြီးတဲ့အချက်ကို အဓိကထားပြီး စဉ်းစားနိုင်ကြဖို့ပါ။ ဘာကြောင့် ပညာရေးမူဝါဒများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲချင်ကြတာလဲ။...
ရခုိုင်ပြည်နယ် ငြိမ်ချမ်းရေး သုံးသပ်ချက် စာတမ်းများ ထွက်ရှိ မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၂၃၊ ၂၀၁၂ ယခင် ဇွန် ၈ က စတင်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စပ်ဒေသမှ အစပြု၍ ဘာသာရေးအစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများကြောင့် အရေးအခင်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် မူဆလင်နိုင်ငံများက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြရာတွင် မြန်မာပြည်၊ ရခုိုင်ဒေသတွင် ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံယူထားသည့် မူဆလင်များအား မြန်မာတို့က ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ဖျောက်ဖျက်နေသည်ဟု စွပ်စွဲချက်များ၊ ဆန္ဒပြကန့်ကွက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အီရန်နိုင်ငံက ကုလသမဂ္ဂတပ်များ ၀င်ရောက်ပေးပါဟု ပြောဆိုသည်အထိ ဖြစ်လာသည်။ အတိတ်ကာလတလျောက်ကို ပြန်ကြည့်လျင် ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးသည် မြန်မာပြည်တွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားနယ်စပ်ဒေသ ပြည်တွင်းစစ်များ၊ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးသမားများအပေါ် အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီး အကျဉ်းချနေမှုများ၊ ၂၀၀၇ ရွှေဝါေ၇ာင်သံဃာတော်များ သတ်ဖြတ်နှိမ်နှင်းခံရခြင်း၊...
ဦးအုန်းကျော် ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၁၂ “ဦးလေးရေ…ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးကို ပြန်ပြီးပြုပြင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ ထိန်းသိမ်းဖို့ အကြံပြုတာတွေ တောင်းဆိုတာတွေ အခုတလော မီဒီယာတွေ မှာ တွေ့နေရတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဦးလေးရဲ့သဘောထား ကြားပါရစေခင်ဗျား” “ငါ့တူက ဦးလေးကို ငိုချင်လျက်လက်တို့ လာလုပ်နေပါလားကွာ။ အေး မင်းတို့ရဲ့ခေတ်မှာ မဖြစ်ညစ်ကျယ် အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ဆိုတာ တွေနဲ့ပဲ ဘွဲ့ရခဲ့ကြတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့အစဉ်အလာကို လွမ်းမောတသစရာမရှိပဲ ဖြစ်နေတာပေါ့ကွာ။ ဒါပေမဲ့ ဦးလေးတို့လို လူကြီး တွေအဖို့မှာတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးမှာ ကျောင်းတက်ခဲ့ကြလေတော့ အခုလိုဖြစ်ပျက်နေတာ မြင်ရတာ ရင်ထဲမှာမချိဘူးကွ” “ဘယ်လို ဖြစ်ပျက်နေလို့လဲ ဦးလေးရ” “ဘယ်လို ဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကို မပြောခင် ဦးလေး ဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာကို အရင်ပြောပြမယ်။ ဟိုတနေ့က ကမာရွတ်လှည်း တန်းမှာနေတဲ့ မိတ်ဆွေတယောက်ဆီအလည်သွားရင်း အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဝင်းထဲကို...
လူထုစိန်ဝင်း – သတ္တိကောင်းတဲ့ သတင်းစာဆရာ မောင်စွမ်းရည်၊ (ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၀၆) မိုးမခပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း၊ ဇွန် ၁၈၊ ၂၀၁၂ လူထုစိန်ဝင်းဟာ ထောင်သက် စုစုပေါင်း ၁၃ နှစ် တိတိ ရှိပါတယ်။ ကိုကိုးကျွန်းအကျဉ်းထာင်ကို အပို့ခံရတဲ့ လူထုသတင်းစာ အယ်ဒီတာနဲ့ သတင်းထောက် ၃ ဦးအနက် လူထုစိန်ဝင်းလည်း ပါခဲ့ပါတယ်။ သတင်းစာဆရာဘ၀မှာ တသက်လုံး စွန့်စားကျင်လည်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်တပ်က ထုနှက် ကန်ကျောက်တာတွေကို ဖွတ်ဖွတ်ကြေအောင် ခံခဲ့ရပါတယ် … ၊ မိုးမခမှာ ၂၀၀၆ ဇွန်လက ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဆရာမောင်စွမ်းရည်ရဲ့ စာမူကို ဆရာလူထုစိန်ဝင်း ကွယ်လွန်တဲ့ ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ No tags for this...
“ပြည်သူတရပ်လုံးက ပါးပါးနပ်နပ် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပါတယ်” နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့ နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆု လက်ခံရယူပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်း မူရင်း နှင့် ဘာသာပြန် ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၂ (မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုသူမှာ Dr ကောင်းမြတ်ကျော်ဖြစ်သည်။ မိုးမခက အနည်းငယ် ပြန်လည် တည်းဖြတ်ထားသည်) No tags for this post.
လူထုစိန်ဝင်း (၁၉ ၄၀ – ၂၀၁၂) ကွယ်လွန် မိုးမခ၊ ဇွန် ၁၈၊ ၂၀၁၂ ယမန်နေ့ညက ရန်ကုန်မြို့နေ၊ ၀ါရင့် သတင်းစာဆရာကြီး လူထု (ဦး) စိန်ဝင်း (၇၂ နှစ်) ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်၏ စာနယ်ဇင်းလောက၏ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ ကြယ်တာရာတပွင့် ဆုံးရှုံးရသည့်အတွက် မိုးမခမီဒီယာ စာနယ်ဇင်းဝိုင်းတော်သားများ အားလုံးက ၀မ်းနည်းကြောင်း မှတ်တမ်းပြုလိုက်ပါသည်။ မြန်မာအိုင်အက်စ်ပီမှာ တင်ထားတဲ့ သတင်းစာ ဆရာကြီး လူထုစိန်ဝင်းရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်းကို လက်လှမ်း မီသလောက် စုဆောင်း တင်ပြ လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ဓာတ်ပုံ – မိုးမခ) လူထုစိန်ဝင်း (၁၉ ၄၀ – ၂၀၁၂) စာရေးဆရာ သတင်းစာ...
အိုးဘိုထောင်ထဲက အရှင်ဝီရသူ (မစိုးရိမ်)၏ အိပ်မက်ထဲက သာသနာပြုတက္ကသိုလ် အရှင်ဝီရသူ(မစိုးရိမ်)။ မေ ၁၈၊ ၂၀၁၂ ကျွန်ုပ်တို့သာသနာတော်၌ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှ သံဃာတော်များ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသည့် စာမေးပွဲကြီးတစ်ခုရှိ၏။ နိုင်ငံတော်အစိုးရ အဆက်ဆက်က ကြီးမှူးကျင်းပခဲ့သော စာမေးပွဲကြီး ဖြစ်၏။ ဓမ္မာစရိယနှင့် ပထမပြန် စာမေးပွဲကြီးဟု ထင်ရှား၏။ ပထမပြန်စားမေးပွဲသည် အခြေခံအဆင့်ဖြစ်ပြီး ပထမငယ်တန်း၊ ပထမလတ်တန်း၊ ပထမကြီးတန်းဟူ၍ သုံးဆင့်ရှိ၏။ အငယ်တန်း၊ အလတ်တန်း၊ အကြီးတန်းဟု လူသိများ၏။ အကြီးတန်း အောင်ပြီးလျှင် ဓမ္မာစရိယတန်း တက်ရ၏။ ဓမ္မစရိယတန်း ဆိုသည်မှာ (ဓမ္မ- တရားစာပေ၊ အာစရိယ- ပို့ချသူဆရာ) စာချဆရာဖြစ်အတန်း(စာချတန်း)ဟု အဓိပ္ပါယ်ရ၏။ ဓမ္မာစရိယ (စာချ)တန်း၌ ဝိနည်း၊ သုတ္တန်၊ အဘိဓမ္မာဟူ၍ ကျမ်းရင်းသုံးကျမ်း ပြဌာန်းထားရာ တစ်ကျမ်းအောင်လျှင်...
သန်းဝင်းလှိုင် ။ မေ ၁၄၊ ၂၀၁၂ မြန်မာပြည်တွင် နာမည်ဆိုးနှင့်ကျော်ကြားခဲ့သည့် ကွယ်လွန်သူ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ၊ သမ္မ တဟောင်းနှင့်စစ်အာဏာရှင် အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းသည် သခင်ဗစိန်၊ သခင်ထွန်းအုပ်တို့ဦးစီးသော တို့ဗမာအစည်းအရုံးမှ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ပြီး၊ ဂျပန်စစ်ပညာသင် စတုတ္ထအသုတ်အဖွဲ့ဝင်လည်း ဖြစ်သည်။ အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း၏ အမည်အရင်းမှာ ကိုရှုမောင်ဖြစ်သည်။ သခင်ဗစိန်၊ သခင်ထွန်းအုပ်တို့ဦးစီးသော တို့ဗမာအစည်းအရုံးသို့ ဝင်ရောက်လာသောအခါ သခင်ရှုမောင်ဖြစ်လာသည်။ ဂျပန်စစ်ပညာသင်တန်းတက်စဉ်က ဂျပန်အမည်မှာ တကာစုဂိစုစုမု (Takasugi Susumu) ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တွင် ၁၉၄၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၂၆ ရက်နေ့၌ ဗိုလ်အမည်ခံယူရာတွင် ဗိုလ်နေဝင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီကိုဖျက်သိမ်း​၍ နိုင်ငံတော်ကောင်စီစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်တွင် ဦးနေဝင်းဖြစ်လာသည်။ ဦးနေဝင်းကို ၁၉၁၀ ပြည့်နှစ်...
၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်၊ ကွယ်လွန်သူ ဦးကြည်မောင်ရဲ့ နိုင်ငံရေးစာတမ်း ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်အခမ်းဆက် ပြန်လည်ကောက်နုတ်ချက်၊ ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၂ ( ဧပြီလထဲမှာ ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်မှာ ဦင်္းကြည်မောင်ရဲ့ နိုင်ငံရေးစာတမ်း ၁ခု အခမ်းဆက်ပါလာတယ်။ ဦးကြည်မောင်ကို ပြန်လည်မိတ်ဆက်ရရင် အင်န်အယ်ဒီပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦး၊ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါတီကို အနိုင်ရပါတီအဖြစ် ဦးဆောင်ခဲ့သူ၊ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၄ မှာ ဆရာကွယ်လွန်တယ်။ ပါတီထူထောင်ချိန်က စတင်ပြီး သုတေသနဌာနမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်လို့ သူ့ကိုယ်ရေးအကျဉ်းမှာ ဖော်ပြထားတာကြောင့် ကိုလိုနီခေတ် ကျောင်းသားသပိတ်အရေးတော်ပုံတပ်သားတဦးအဖြစ်ကနေ အမျိုးသားရေးအတွက် စွမ်းစွံတမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ မာန်မာနမရှိမှုကို ဖော်ကျုးထားသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် တနှစ်လုံး လူငယ်တွေအတွက် စာမျက်နှာ ၆၀ လောက်ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးစာတမ်းတွေ ရေးနေခဲ့ပါတယ်။...
သိန်းသန်းဦး (၁၉၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆၊ တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်ဟောင်း) မတ်လ ၂၄၊ ၂၀၁၂ ဝေးလံသောအရပ်မှ ရေစီးသံလို အသံသဲ့သဲ့ ကြားနေရသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးက ညဖြစ်လေသလားမသိ မှောင်မှောင်မဲမဲ။ အရင်း တုန်းကာ အဖျားသွယ်သွားသော အမျိုးအမည်မသိ ပင်အုပ်ကြီးများနှင့် တော၏အလယ်ခေါင်တွင် ကျနော်ရောက်နေသည် ထင်သည်။ မျက်စိတဆုံး ပင်အုပ် တောအုပ်။ ကြည့်လေရာ ခြာခြာလည်။ ထိုပင်အုပ်ထိပ်ဖျားလွတ်ရာနေရာတွင် ကောင်းကင်ကို မှိန်ဖျဖျဖြစ်နေရသည်။ ကြယ်တပွင့် လတစင်းမရှိ။ ဟိုးကောင်းကင်မှ နှင်းစက်လား မိုးစက်လားမသိ ရေစက်များက ခြောက်သွေ့တင်းမာနေသော ကျနော့်နှုတ် ခမ်းထက်သို့ ကျလာသည်။ ရေစက်များ၏အတွေ့က အေးမြစူးရှစွာ ကျနော့်မနောအာရုံထဲ ထိုးဖောက်ဝင်လာသည်။ ရေစီးသံသဲ့သဲ့က ခေါ်သံအဖြစ် တဖြေးဖြေးပီပြင် ကျယ်လောင်လာသည်။ ညီလေး . . . ညီလေး...